I-China Aluminium i-Knoffled Standoff, i-Aluminium Standoff, iPercision Aluminium Knoffled Standoffs Umvelisi
Inkcazo:I-Aluminium Knurled Standoff,I-Aluminium Standoff,IAluminiyam yeAluminium engagungqangayo,Ukujonga i-Aluminium Knoffled Standoffs,,
Home > Imveliso > I-Standoffs ezenziwe ngokwezifiso > I-Aluminium Knurled Standoff
Iintlobo zeMveliso ze- I-Aluminium Knurled Standoff , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Aluminium Knurled Standoff , I-Aluminium Standoff ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-aluminium ukuma kwe-aluminium ukuma kwe-spacer yabesifazane emisonto ejikelezileyo
Iimveliso ezintsha ezishushu ezithengisayo zowesifazane ezihanjisiweyo zangumjikelo omileyo
I-M3 Knurled standoff Aluminium alloy imibala eyahlukeneyo spacer
I-M3 hexagonal aluminium standoff ye-RC kvadrokopter multultterter
Ukubonelela ngokuthe ngqo ngeM3 Round Aluminium HobbyCarbon Standoff Intshayelelo yeMveliso I-S tandoff luhlobo lwezinto zokubopha, zihlala zisetyenziswa ngezikrufu.inemisonto kwicala lesiphelo, ke xa ujija iphepha, izinto ezintathu zinokwenza yonke...
Ingcaciso yeMveliso Ukuphakama okuphezulu kweAluminiyam Anodizing ii-Knoffled Standoffs Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye...
Ingcaciso yeMveliso Intshukumo yesiko eligoqileyo le-anodized aluminium standoff spacer Intshayelelo
Intshayelelo yeMveliso Ubungakanani besiko Anodizing Round Aluminium Standoff I-Aluminium Standoff ithathwa ngokubanzi njengohlobo olunye Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam . Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye
I-M3 I-Standoffs yabasetyhini ababhinqileyo I-Aluminium ebunjiweyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya....
Intshayelelo yeMveliso I-Aluminium Standoff ithathwa ngokubanzi njengohlobo olunye Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam . Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume...
Bonelela ngokuthe ngqo kwi-M3 Round Aluminium HobbyCarbon Standoff Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ikholam...
Ixabiso ngefektri enemibala ye-anodised Aluminium yamadoda amileyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho...
Ixabiso ngefektri enemibala ye-anodised Aluminium yamadoda ayimileyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho...
Umgangatho ophakamileyo we-M3 owenziwe nge-Round ye-Aluminium eQokelelweyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya....
I-OEM Fasteners CNC Imibala ejikelezileyo Spacer Knurled Standoff Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho...
Ukujonga ngokuthe ngqo isiko leNkcitho yeAluminiyam yeAluminiyam eStrand Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya....
I-15mm Knurled Wheel Spacers Isixhobo: IAluminiyam yabanye (ibrass, iStainless, insimbi, iCarbon iron) Ubungakanani: M3 Uhlobo: IAlumum Hex Standoff, iAluminium iNyathelo lokuma, iAluminium eyiStrump eqingqiweyo, iAluminium Round Standoff Unyango...
KwiChina I-Aluminium Knurled Standoff Abaxhasi
I-Knoffled standoff ifana ne-aluminium ejikeleze i-standoffs, ezenziwe ngomgangatho ophezulu we-aluminium, ifaka i-anodised kumaliza.both glossy kunye neMatte ziyafumaneka. Emva kokutshintsha umphezulu wokuma okujikelezileyo, ii-standoff ezisongelweyo zibonelela ngombono okhanyayo, kwaye zithandwa kakhulu ngexeshana nje elincinci, zineemfuno ezinkulu.
I-standoffs ezijijekileyo ezenziwe ngentloko zonke zamkelekile kuthi.Ngoluhlobo oludumileyo, njenge-M3X25mm, M3X30mm, M3X35mm ubude, zihlala zinemibala yonke kwisitokhwe, zinokuhamba ngexesha elifanelekileyo.
I-Aluminium Knurled Standoff I-Aluminium Standoff IAluminiyam yeAluminium engagungqangayo Ukujonga i-Aluminium Knoffled Standoffs I-M3 I-Aluminium Knurled Standoff